ဤသည်အသစ်သောနှင့်အံ့မခန်း Tesla မော်ဒယ် Y ကို | Gadget သတင်း
Jordi Gimenez | | တင်ပြချက်များ
ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အကြာတွင် Elon Musk ကိုယ်တိုင်ပင်သူသည်ဤ Tesla Model Y ၏ကားသစ်အားလုံး၏အတိုကောက်ပေါင်းစပ်ထားသည့် -S3XY, Model S, Model 3, Model X နှင့် Model နှင့်အတူဆိုင်းငံ့ခြင်းနှင့်ဟာသထည့်ခြင်းများပြုလုပ်ခဲ့သည်။ Y- ငါတို့ပြီးသားရှိသည် အသစ်ဖြန့်ချိ Model Y.
ဒါကတစ်နည်းနည်းနဲ့ထားရန်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ကားတစ်စီးဖြစ်ပါတယ် Tesla Model3၏အစ်ကိုဖြစ်သူ နှစ်ပေါင်းများစွာဤမနေ့ကဤကားသစ်အကြောင်းပြောပြီးနောက်နောက်ဆုံးတွင်တရားဝင်ဖြစ်လာသည်။ မကောင်းတဲ့အချက်ကတော့ Tesla မှာတင်ထားတဲ့ကားတွေလိုပဲသူတို့အတွက်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအချိန်လိုပါပဲ။ ဒီကိစ္စမှာကျန်မော်ဒယ်တွေနဲ့မတူတော့ဘူး၊ နောက်လာမဲ့ ၂၀၂၀ မှစပြီးလာမယ့် ၂၀၂၀ မှာဖြစ်မယ်၊ ဒါပေမယ့်အစမှာမဟုတ်ဘူး။ အဘယ်သူမျှမ, အဆုံးနှစ်သို့မဟုတ် 2020 အစောပိုင်းကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌။
1 ၄၈၀ ကီလိုမီတာကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်နှင့်ဤတက်စလာအသစ် SUV အတွက် ၇ ထိုင်ခုံ
2 Model Y ၏ဒီဇိုင်းနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်
3 Tesla မော်ဒယ် Y ကိုစျေး
၄၈၀ ကီလိုမီတာကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်နှင့်ဤတက်စလာအသစ် SUV အတွက် ၇ ထိုင်ခုံ
ဤသည်နှင့်အတူဤမော်ဒယ် Y. များအတွက်အဖုံးစာဖြစ်ပါတယ် ကီလိုမီတာ ၄၈၀၊ ထိုင်ခုံ ၇ နေရာရှိသည် ၎င်းသည်နည်းလမ်းတိုင်းတွင်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောလျှပ်စစ် SUV ကားတစ်မျိုးဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ပြောနိုင်သည်။ ပြီးခဲ့သည့်မနက်ကကားစတင်ဖွင့်ပွဲတွင်တက်ရောက်သူများသည်စိတ်ပျက်စရာမရှိခဲ့ပါ။ ၎င်းသည်တက်စလာကားများကဲ့သို့ကြီးမားသောကားကဲ့သို့ဖြစ်သည်။ အမှန်တရားကတော့ Elon Musk မှာစိတ်ဓာတ်ကျပြီးသူ့ရဲ့ထုတ်ကုန်တွေကိုဘယ်လိုကောင်းကောင်းတင်ရမယ်ဆိုတာကိုကောင်းကောင်းသိတယ်။ ဒါပေမယ့်သူသိသမျှကတော့ဒီအမှတ်တံဆိပ်ရဲ့မော်ဒယ်သစ်ရဲ့ဒီဇိုင်းကိုဘယ်လိုလျှို့ဝှက်ထားရမလဲဆိုတာပဲ။
အခြားတစ်ဖက်တွင်မူကော့စ်ကိုယ်တိုင်က၎င်းကိုစိတ်ချစေကြောင်းဖော်ပြရန်အရေးကြီးသည် Model3နှင့်ဤ Model Y အသစ်သည်အစိတ်အပိုင်းများ၏ ၇၅% မျှဝေသည် ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ပိုကြီးတဲ့ဗားရှင်းကိုရင်ဆိုင်နေရတယ်၊ ဒါပေမဲ့ဒီဇိုင်းလိုင်းနဲ့အရင်မော်ဒယ်များနဲ့တန်းတူဆက်စပ်တဲ့ဒီကားရဲ့စျေးနှုန်းကမျှော်လင့်ထားတာထက်အတော်လေးနိမ့်ကျတယ်။ ဤကား၏အတွင်းပိုင်းသည်ပုံစံ ၃ တွင်ရှိပြီး (နေရာပိုများသော) နှင့်တူညီသည်။ ဤနည်းအားဖြင့်ဖန်ခေါင်မိုးသည်ထင်သာမြင်သာကျယ်ဝန်းသည်ကိုခံစားနိုင်ကြောင်း၊ ဗဟိုခလုတ်နေရာသည်နေရာလွတ်များသို့မဟုတ်ဒိုင်ခွက်များပြသထားသည်။ နှင့်အတူကြီးမားတဲ့စင်တာမျက်နှာပြင်အကြီးလှပါတယ်။
Model Y ၏ဒီဇိုင်းနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်
ပြင်ပမှမြင်ရသောဤ Tesla Model Y အသစ်သည်လိုင်းများပါ ၀ င်သော Model3နှင့်တူညီသောကားတစ်စီးဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုလူကိုယ်တိုင်ဖြစ်စေဘေးချင်းယှဉ်ကြည့်ရန်လိုအပ်မည်ဖြစ်သော်လည်းယေဘုယျအားဖြင့်၎င်းတို့သည်အတော်လေးဆင်တူသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းသည်ဒီဇိုင်း၏ "လည်ပင်းချိုး" သောကားမဟုတ်ဟုမဆိုလိုပါ။ဟုတ်ကဲ့၊ လည်ပင်းကိုလည်ပတ်စေသည့်အခါသင့်လည်ပင်းကိုအမြင့်ဆုံးအထိဆွဲဆောင်စေသည်။ ထို့အပြင်အခြားမူကွဲများနှင့်အတူတူဖြစ်သောအရောင်များသည်၎င်းတို့အားအလွန်ထင်ရှားစေသည်။ တိုတိုပြောရရင်ဒီဇိုင်းကအံ့မခန်းပါပဲ။
ဤပုံစံ Y ၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုကျွန်ုပ်တို့အာရုံစိုက်ပါက၊ ကျွန်ုပ်တို့တွင်ရှိသောဖွဲ့စည်းပုံရှိသည်ကိုနားလည်သည် Tesla website တွင်ရနိုင်သည် ဒါဟာပုံစံ3နဲ့တူတူပဲ။ အကောင်းဆုံးအပြီးသတ်ထားသောမော်ဒယ်ကားကီလိုမီတာ ၄၅၀ နှင့်အများဆုံးအမြန်နှုန်းမှာ ၂၅၀ ကီလိုမီတာရှိသည် dual-mutor အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အခြေခံအကျဆုံးမော်ဒယ်တွင် Tesla ၏ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ကို ၃၇၀ ကီလိုမီတာအထိလျှော့ချပြီး၎င်း၏အမြင့်ဆုံးအမြန်နှုန်းသည်မစဉ်းစားနိုင်သော 370 km / h သို့ရောက်ရှိလိမ့်မည်။ ဤအရာအားလုံးသည်ထုတ်လုပ်သူမှပေးသောကိန်းဂဏန်းများဖြစ်သည်။ သင်သိသည်နှင့်အမျှဤအချက်များအားလုံးသည်မြို့တော်၊ အဝေးပြေးလမ်းမကြီး၊ အဝေးပြေးလမ်းမကြီး၊ အမြန်နှုန်းစသည်ဖြင့်ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်စသည့်ပြင်ပအချက်များပေါ်တွင်မူတည်လိမ့်မည်။
Tesla မော်ဒယ် Y ကိုစျေး
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤတင်ပြချက်နှင့် Model Y အသစ်၏အဓိကအချက်ကိုသံသယဝင်မိသည်မှာသေချာသည်။ အမှန်တရားမှာ Tesla သည်အသုံးပြုသူများအားလုံးအတွက် "အလွယ်တကူအသုံးပြုနိုင်သည်" ဟုကျွန်ုပ်တို့သတ်မှတ်နိုင်သည်။ Tesla က၎င်း၏အားသွင်းစက်များနှင့် Tesla မှပေးသော ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ ဆော့ဖ်ဝဲလ်နှင့်ဟာ့ဒ်ဝဲတို့၏အရည်အသွေးကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းမပြုဘဲ၊ သို့မဟုတ်ရောင်းပြီးနောက် ၀ န်ဆောင်မှုသည်၎င်း၏မော်ဒယ်အားလုံးတွင်စျေးနှုန်းမြင့်တက်သွားစေသည်။ ကယ်လီဖိုးနီးယားအခြေစိုက်ကုမ္ပဏီသည်မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းအလွန်ကောင်းသောအလုပ်ကိုလုပ်ခဲ့ပြီး၎င်းသည်မှန်ကန်သည် Model3နှင့်ဤ Model Y တို့တွင် Model S သို့မဟုတ် Model X တို့ထက်စျေးနှုန်းချိုသာစွာရှိသည်.
ဒီ Model Y ရဲ့အရိုးရှင်းဆုံးဗားရှင်းရဲ့စတင်စျေးနှုန်း $ 39.000 မှာစတင်ပါလိမ့်မယ်အသုံးပြုသူသည်ကားအသစ်ထဲသို့ထည့်ရန်စိတ်ကူးထားသောအပိုပစ္စည်းများနှင့်အတူ၎င်းစျေးနှုန်းသည်ဒေါ်လာ ၆၀,၀၀၀ အထိရောက်ရှိလိမ့်မည်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်အခွန်နှင့်အခြားသူများကိုရေတွက်လျှင်ဤစျေးနှုန်းများသည်ကျန်တဲ့ဥရောပတစ်ခွင်မှာပိုမိုမြင့်တက်လာမှာသေချာပါတယ်။ အချုပ်အားဖြင့်ဆိုရလျှင်၊ ယနေ့ယူရို ၄၀,၀၀၀ သည်ကျွန်ုပ်တို့အများစုအတွက်မတတ်နိုင်သောစျေးနှုန်းမဟုတ်သော်လည်း Tesla ကို ၀ ယ်လိုသူများသည်ဤကုန်အမှတ်တံဆိပ်၏ကမ်းလှမ်းမှုများကိုအခြားသူများတွင်မတွေ့နိုင်ကြောင်းသိပြီးဖြစ်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » ယေဘုယျ » တင်ပြချက်များ » ဤသည်အသစ်နှင့်အံ့မခန်းတက်စလာမော်ဒယ် Y ကိုဖြစ်ပါတယ်
Amazon Echo Input, Alexa သည်မည်သည့်စပီကာကိုမဆိုယူဆောင်လာသည့်ကိရိယာကိုကျွန်ုပ်တို့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသည်
Amazon တွင် Koogeek နှင့် dodocool ထုတ်ကုန်များအတွက်အကောင်းဆုံးအပေးအယူများ